घट्यो डलरको मूल्य, अन्य देशको विनिमयदर कति ? | Seto Khabar
घट्यो डलरको मूल्य, अन्य देशको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ, जेठ १३ । सोमबार डलरको मूल्य सामान्य रुपले घटेको छ । जेठ १३ गतेका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अमेरीकी डलरको खरिद मूल्य रु.११० रुपैयाँ ९५ पैसा तोकेको छ भने बिक्री मूल्य रु.१११ रुपैयाँ ५५ पैसा तोकेको छ ।
यसैक्रममा, एक युरोको खरिददर रु.१२४ रुपैयाँ ३१ पैसा तोकेको छ भने, बिक्रिदर रु. १२४ रुपैयाँ ९८ तोकेको छ । यसैैगरी, एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर रु. १४१ रुपैयाँ ०५ पैसा छ भने, बिक्रीदर रु. १४१ रुपैयाँ ८२ पैसा रहेको छ । यसैगरी जापानीज १० यनको खरिददर रु. १० रुपैयाँ १५ पैसा छ भने, बिक्रिदर रु.१० रुपैयाँ २१ पैसा रहेको छ ।
कतारी एक रियालको खरिददर रु. ३० रुपैयाँ ४७ पैसा तोकेको छ भने बिक्रिदर रु. ३० रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैक्रममा, कुवेती एक दिनारको खरिददर रु. ३६५ रुपैयाँ १४ पैसा तोकेको छ भने, बिक्रिदर रु. ३६७ रुपैयाँ १२ पैसा तोकेको छ ।